Madaxweynaha Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay geerida ku timid taliyihii ugu horeeyay ciidanka booliiska Soomaaliya Maxamed Abshir Muuse - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay geerida ku timid taliyihii ugu horeeyay ciidanka booliiska Soomaaliya Maxamed Abshir Muuse
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. [Xigashada Sawirka: Cali Ducaale/Sawirqaadaha Madaxweynaha]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid taliyihii ugu horeeyay ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed Maxamed Abshir Muuse.
“Aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan qaranka, waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay, Alle ha u naxariistee, Janaraal Maxamed Abshir Muuse,” ayuu yiri Farmaajo.
“Janaraalku waxa uu ahaa shakhsi karti, dhawrsanaan, daacadnimo iyo dal jacayl ku sifoobay. Waxaa lagu xasuustaa kaalintii uu ka geystay dhismaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed oo muddo 10 sano ku dhaw uu hoggaaminayay. Waxaana Alle (S.W.T) uga baryayaa inuu naxariistii Janno ka waraabiyo, ehelkii iyo qoyskii uu ka baxayna sabar iyo iimaan haka siiyo. Aamiin.” Ayuu ku sii daray.
Sida ay xaqiijiyeen qoyskiisa, taliyihii ugu horeeyay Ciidanka Booliiska Soomaaliya Maxamed Abshir Muuse ayaa ku geeriyooday isbitaal kuyaala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, isagoo da’adiisu ay hayd 91 sanno.
May 23, 2017 Madaxweynaha Soomaaliya oo tagay dalka Jabuuti
Puntland police force launch security operation in Bosaso town
Bosaso-(Puntland Mirror) Puntland police force on Thursday began security operation in Bosaso port town of Bari region, official said. At a press conference in Bosaso, Puntland police force chief Muhiyadin Ahmed Muse said the operation was intended [...]